नेपाल बन्द- देशभर कहाँ के भयो ? यस्तो छ अहिलेसम्मको ताजा अपडेट — Sanchar Kendra
नेपाल बन्द- देशभर कहाँ के भयो ? यस्तो छ अहिलेसम्मको ताजा अपडेट
काठमाडौँ । एमसीसी बिरोधी गठबन्धनले आयोजना गरेको नेपाल बन्दका कारण आज देशभरको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । दिउँसोसम्म आइपुग्दासम्म काठमाडौँमा बन्दको आंशिक प्रभाव देखिएको छ ।
काठमाडौँ बाहिर भने बन्दको प्रभाव परेको छ । बन्दका क्रममा पोखरामा बिहानै बम बिस्फोट भएको थियो भने काठमाडौँको संसद भवन अगाडी पनि संकास्पद बस्तु फेला परेको थियो ।
संसद भवन अगाडि राखिएको ‘प्रेसर कुकर बम’ भनिएको शंकास्पद वस्तु डिस्पोज गरिएको छ । नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले सो शंकास्पद वस्तु डिस्पोज गरेको हो । संसद भवन अगाडिको व्यस्त सडकमा अज्ञात समूहले सोमबार बिहान ‘नो एमसीसी’ लेखेर प्रेसर कुकर छाडेका थिए ।
त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले घटनास्थललाई नियन्त्रणमा लिएर शंकास्पद बस्तु झण्डै दुई घण्टा लगाएर डिस्पोज गरिएको हो । सो क्रममा कुकरभित्र खाली कागज र प्लाष्टिक भेटिएको सेनाले जनाएको छ ।
एमसीसीको विरोधमा विभिन्न साना ८ कम्युनिस्ट घटकले सोमबार बन्दको आह्वान गरेका छन् । सोही क्रममा शंकास्पद बस्तु फेला परेको हो । शंकास्पद वस्तु फेला परेपछि बानेश्वर क्षेत्रका त्रास उत्पन्न भएको थियो ।
त्यस्तै काभ्रेमा पनि संकास्पद बस्तु फेला परेको थियो । पुर्व पश्चिम राजमार्गमा बन्द अवज्ञा गरेको भन्दै केहि गाडीमा तोडफोड र आगजनी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । बुटवलमा बन्दले जन जीवन ठप्प छ । बन्दका क्रममा बुटवलमा १७ जना प्रर्दशनकारी पक्राउ परेका छन् ।
नेकपा क्रान्तिकारी माआोवादीका पोलिटब्युरो सदस्य प्रेम सुवेदी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा रूपन्देहीका जिल्ला सेक्रेटरी विरेन्द्र बिक, खोमा तरामु मगरसहित १७ जना बुटवलको बसपार्क क्षेत्रबाट पक्राउ परेका हुन् ।
बन्द गराउँदै हिँडेका उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा राखेर अनुसन्धान थालिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी ठगबहादुर केसीले बताए ।
बन्दका कारण बुटवलसहित रुपन्देहीको जनजीवन प्रभावित भएको छ । राजमार्गमा सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन् भने निजी सवारी साधन पनि अघिल्ला दिनको तुलनामा धेरै कम चलेका छन् ।
त्यस्तै पाल्पा तानसेनको आन्दोलन चोक, लहरे पिपलमा नारा जुलुश गर्दै एमसीसीको विरोधमा सडक तातीरहेको समयमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी बन्दकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। आन्दोलनकारीले प्रहरीको घेरा तोड्दैँ लहरेपिपल क्षेत्रबाट आन्दोलन चोकसम्म जादैँ गर्दा प्रहरीले बन्दकर्तालाई पक्राउ गरेको हो।
पक्राउपर्नेहरुमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पाल्पाका अध्यक्ष विशाल दर्लामी, कोषाध्यक्ष टिकाराम पौडेल, विप्लव नेकपाका जिल्ला सचिव भुवन जिसी, अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य लंक राना, नेकपा माओवादी क्रान्तीकारीका सचिव लिला श्रेष्ठ, अखिल क्रान्तीकारीका जिल्ला संयोजक सुदिप विश्वकर्मा, युवा संघठनका उपाध्यक्ष बेदप्रसाद विश्वकर्मालाई नियन्त्रण लिएको हो।
नियन्त्रणमा लिएका बन्दकर्तालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पामा राखिएको छ। त्यस्तै पोखराबाट ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपानिकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका केन्द्रिय संयोजक मनिष भट्टराई, अखिल छैठौंका जिल्ला अध्यक्ष सोम अधिकारी र राजमो नेता मोहन थापा पोखरा पृथ्वीचोकबाट पक्राउ परेका छन्
उनीहरुलाई अहिले बैदाम इलाका प्रहरी कार्यालयमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । उता नेपाल बन्दको असर सुदुरपस्चिमका ९ वटै जिल्लामा परेको छ । सुदुरपस्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र वैतडी लगायतका जिल्लामा बन्दको प्रभाव परेको छ ।
बन्दका कारण लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधन ठप्प छन् भने विद्यालय र बजार पनि खुलेका छैनन् । बन्दको आह्वान गर्दै ६ राजनीतिक पार्टी, २ मोर्चाका नेता–कार्यकर्ता बिहानैदेखि महेन्द्रनगर, डडेल्धुरा बागबजार, बैतडी लगायतका जिल्लाका सडकमा उत्रिएका छन् ।
कञ्चनपुरका सडकमा बिहानैदेखि टायर बालेर बन्दकर्ताहरु प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । राष्ट्रघाती एमसिसि बिरुद्ध सडकमा उत्रिएका बन्दकर्तालाई प्रहरीले लाठिचार्ज गरेको थियो ।
नेपाल बन्द गराउदै हिडेको अवस्थामा नेकपा भीमदत्तनगर सचिब दीपेन्द्र ऐरी र अखिल क्रान्तिकारी कञ्चनपुरका सह-सचिब हरिश ऐरीमाथि प्रहरीले प्रहरीले लठ्ठी चार्ज गर्दा घाइते भएका छन् । उनहरु दुवैको टाउकोमा चोट लागेको नेकपा कञ्चनपुरले जनाएको छ ।
बन्दकर्ताहरूले एम्बुलेन्स, पानी र दू‌ध बोक्ने गाडी, प्रेस, कूटनीतिक नियोगका गाडी चल्न दिएका छन् भने अरू प्रायः सबै बन्द गराएका छन् । बन्दमा जनसमुदायको व्यापक समर्थन देखिएको नेकपाले जनाएको छ । बन्दमा कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिनका लागि मुख्य मुख्य चोकहरुमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।